Min Thuta, Author at Phoenix Emperor
Author: Min Thuta
Home / Articles Posted by Min Thuta
24Aug 2018 by Min Thuta
Interior Design ကို အရောင်များနဲ့အလှဆင်မယ်
မိမိရဲ့အိမ်အတွင်းပိုင်းအတွက်ဆေးရောင်ချယ်ရာမှာ အရောင်ရွေးချယ်မှု ဟာအလွန် အရေးကြီးပါတယ်။အသုံးပြုလိုက်တဲ့အရောင်အပေါ်မူတည်ပြီး အိမ်အတွင်း အလင်း အမှောင်သာမက ပရိဘောဂတွေနဲ့အလှဆင်ရာမှာပါ အဆင်ပြေစေဖို့လိုအပ်ပါတယ်။နာမည်ကျော် Designer Mark McCaule ရဲ့အဆိုအရ အရောင်အရမ်းရင့်ပီး Dark ဆန်တဲ့အရောင်တွေကို ကြမ်းခင်းအနေ နဲ့အသုံးပြုဖို့သင့်တော်ပီး နံရံအတွက်ကိုတော့ အရောင်မရင့်မနု Medium color တွေသုံးဖို့သင့်တော်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။မျက်နှာကျက်ကိုတော့ Light ဆန်တဲ့အရောင်ဖျော့ဖျော့ လင်းလင်းလေးတွေအသုံးပြုပေးခြင်းဟာအသင့်တော်ဆုံးပါ လို့လဲဆိုပါတယ်။ တကယ်တမ်း မိမိရဲ့အိမ်အတွင်းဟာ အပြင်ကမ္ဘာ ကြီးလိုပါပဲ။ မျက်နှာကျက်ကိုကောင်းကင်ပြာလို ကြမ်းပြင်ကိုမြေကြီးလို နံရံတွေကိုသဘာဝတရားကပေးတဲ့အရောင်တွေလိုသတ်မှတ်ပြီး အရောင်ရွေး ချယ်သင့်တယ်လို့အကြံပေးထားပါတယ်။အောက်တွင် Designer တွေရွေးချယ်အသုံးပြုထားတဲ့ ခေတ်မီတဲ့အိမ်အတွင်းပိုင်းအရောင်အသုံးပြုထားမှုပုံလေးတွေကိုဖော်ပြပေးထားပါတယ်။ Ref - hgtv
07Aug 2018 by Min Thuta
ခေတ်မှီပြီးရိုးရှင်းလှပတဲ့ ဧည့်ခန်း Design များ
အိမ်တစ်အိမ်အတွက် ဧည့်ခန်းသည် ခေတ်မီဖို့လည်း လိုသလို လှပသေသပ်ပြီး အရိုးရှင်းဆုံးဖြစ်ဖို့လည်း လိုအပ်ပါတယ်။ ဧည့်ခန်းဆိုတာ အိမ်တစ်အိမ်ရဲ့ နှလုံးသား ဖြစ်ပါတယ်။ မိမိရဲ့အိမ်ကို ဝင်လိုက်ပီဆိုရင် ပထမဆုံး တွေ့ရမှာက ဧည့်ခန်းပါပဲ။ လုံးချင်းအိမ်ဖြစ်ပါစေ တိုက်ခန်းဖြစ်ပါစေ ဧည့်ခန်းဆိုတာ မိမိအိမ်ကိုလာရောက် လည်ပတ်သော ဧည့်သည်များသာမက မိမိတို့ မိသားစု အချိန်အများဆုံး ကုန်ဆုံးသော နေရာဖြစ်လို့ အလင်းရောင် ကောင်းမွန်ပီး လေဝင်လေထွက်ကောင်းမယ့် နေရာမျိုးဖြစ်ရပါမယ်။ တစ်နေကုန် အလုပ်ခွင်မှာ ပင်ပင် ပန်းပန်း အလုပ်လုပ်ရတဲ့ နေ့မျိုးဆို လူတိုင်း မိမိအိမ်လေးကို ပိုပြီး သတိရတတ် ရပါ တယ်။ ဒါကြောင့် မိမိဧည့်ခန်း အရောင်ရွေးချယ်မယ်ဆိုလျင် မှိုင်းသောအရောင်များ မရွေးချယ် မိစေဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် လှပခေတ်မီပြီး ရိုးရှင်းတဲ့ ဧည့်ခန်း Design Idea လေးများကိုဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်။
17Jul 2018 by Min Thuta
ချစ်စဖွယ် ဝါးအိမ် Design လေးတွေ
ကိုယ့်ရဲ့ခြံဝန်းထဲမှာ ဒါမှမဟုတ် ကိုယ်ဝယ်ထားတဲ့မြေနေရာကျယ်တဲ့ခြံထဲမှာပဲဖြစ်ဖြစ် resort တွေမှာလိုမျိုးအနားယူအပန်းဖြေစရာ ဝါးအိမ်လေးတွေ ဆောက်ချင်ကျမှာပါ။ (more…)
06Jul 2018 by Min Thuta
သင့်ရဲ့ Workspace လုပ်ငန်းခွင်ဧရိယာကိုသေသေသပ်သပ်နဲ့အမြင်ရှင်းလင်းစေမဲ့ အပြင်အဆင်လေးများ
သင့်ရဲ့ Workspace လုပ်ငန်းခွင်ဧရိယာကိုသေသေသပ်သပ်နဲ့အမြင်ရှင်းလင်းစေမဲ့ အပြင်အဆင်လေးတွေ ကိုဖော်ပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။ သင့်ရဲ့ရုံးခန်း နဲ့သင့်ရဲ့ employers တွေအတွက် ရှင်းလင်းသေသပ်တဲ့ အလုပ်စားပွဲ နေရာလေးတွေရှိဖို့လဲလိုအပ်ပါတယ်။ အလုပ်စားပွဲဆိုတာ ဒုတိယအိမ်ပါပဲ။ များသော အားဖြင့် မိမိရဲ့အချိန်ကိုကုန်ဆုံးရာနေရာဖြစ်လို့အရေးပါပါတယ်။ ရှင်းလင်းသေသပ်တဲ့နေရာမှာအလုပ်လုပ်ရခြင်းဟာစိတ်ကြည်လင်စေပြီးလုပ်ငန်းအတွက်စဉ်းစားတွေးခေါ်တဲ့နေရာမှာလဲအထောက်အကူပေးပါတယ်။သင့်ရဲ့စိတ်ကိုပျော်ရွှင်စေပြီးသက်တောင့်သက်သာလဲဖြစ်စေပါတယ်။ နေရာစားလဲသက်သာပြီး Laptop Desktop စတဲ့ လုပ်ငန်းသုံးပစ္စည်းတွေကိုလဲသေချာစွာထားနိုင်တဲ့အပြင် သေသပ်ရှင်းလင်းတဲ့ Workspace Idea လးတွေကိုဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်…. (more…)
25Jun 2018 by Min Thuta
ပြောင်မြောက်ပြီးရိုးရှင်းတဲ့လက်ရာများနဲ့ဖွဲ့စည်းထားတဲ့ Asian Living Room ဒီဇိုင်းများ
အာရှနိုင်ငံတွေရဲ့အိမ်တွင်းအလှဆင်မှုပုံစံတွေကိုအာရှနိုင်ငံတွေမှာသာမက ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းကနှစ်ခြိုက်ကျပါတယ်။ ရိုးရှင်းသပ်ရပ်ပြီးဆွဲဆောင်မှုရှိတဲ့အခန်းဖွဲ့စည်းပုံအပြင် ပရိဘောဂ ဒီဇိုင်းတွေကလည်းဆွဲဆောင်မှု ရှိပါ တယ်။ တကယ်လို့သင်ဟာရိုးရှင်းသပ်ရပ်ပြီးဆွဲဆောင်မှုရှိတဲ့အခန်းတစ်ခုကိုလိုချင်သူဆိုရင်တော့ဒီအခန်းဖွဲ့ စည်းပုံကသင့်အတွက်အကောင်းဆုံးဖြစ်မှာပါ။ ဒါကြောင့် Asian Living Room Idea တွေကိုလေ့လာလို့ ရအောင်ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်။ ခေတ်နဲ့အညီ ဖွဲ့စည်းထားတဲ့ဒီဇိုင်းတွေကနေ ရိုးရာဓလေ့အတိုင်း ဖွဲ့ စည်း ထားတဲ့ ဒီဇိုင်းတွေအထိစုံလင်စွာပါဝင်လို့ သင့်ရဲ့နေ့စဉ်ဘဝနေထိုင်မှုကိုပျော်ရွှင်စွာဖြတ်သန်းနိုင်ဖို့ ရွေးချယ် လေ့လာလို့ရရန်ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်။ Ref - architectureartdesigns
12Jun 2018 by Min Thuta
သင်ရဲ့နေထိုင်တဲ့ နေရာက ကျဉ်းနေလို့စိတ်ညစ်နေပါသလား?
သင်နေတဲ့အခန်းက ကျဉ်းနေသေးလို့ အလှဆင်ဖို့အတွက်စဉ်းစားရခက်နေရင်တော့ ဒီ idea လေးတွေကိုလေ့လာပြီးပြင်ဆင်လို့ ရတယ်နော်။ (more…)